नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : भुकम्प पीडित जनता झरीमा रुझ्दै, खुल्ला आकाश मुनी रात बिताउँदै गर्दा सभासदहरु प्राडो र पजेरोमा त्रिपाल घर लैजाँदै ! त्रिपाल बोक्नेले अरु के बाँकी राख्लान !
भुकम्प पीडित जनता झरीमा रुझ्दै, खुल्ला आकाश मुनी रात बिताउँदै गर्दा सभासदहरु प्राडो र पजेरोमा त्रिपाल घर लैजाँदै ! त्रिपाल बोक्नेले अरु के बाँकी राख्लान !
"पाँच छ बर्ष देखी शान्ति र संबिधानका नाममा लुटिरहेका लुटेराहरुले त्रिपाल सम्म पनि बाँकी राखेनन" भन्छन भुकम्प पीडित हरु ! हेर्नुस तल त्रिपाल ओसार्ने सभासद र त्रिपाल नपाउनेहरुको फोटो कथा !